Fitsidihana An’i Honduras | Tany sy Mponina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Fitsidihana An’i Honduras
MIDIKA hoe “Lalina” ny hoe Honduras amin’ny teny espaniola. Io angamba no notenenin’i Christophe Colomb, rehefa hitany ny ranomasina teo amin’ny morontsiraka atsinanan’ilay faritra. Misy milaza fa izay no nahatonga ny anaran’ilay tany hoe Honduras.
Miray hina be ny fianakaviana any, sady tsy misara-mianakavy. Miara-midinika tsara koa ny mpivady rehefa hanapa-kevitra momba ny fianaran’ny ankizy, ny fandaniana ao an-trano, na ny zava-dehibe hafa.
Metisy ny ankamaroan’ny olona any, izany hoe taranaky ny tompon-tany sy ny Eoropeanina. Misy foko atao hoe Chortí any, ary tena tompon-tany ny razamben’izy ireo. Misy foko hafa koa any, anisan’izany ny Garifuna, izay mpiavy ny razambeny.
Lehilahy avy amin’ny foko garifuna mively amponga
Ny Garifuna dia taranaky ny Afrikanina sy foko indianina atao hoe Karaiba, izay nipetraka tao amin’ny Nosy Saint-Vincent. Tonga tao amin’ny Islas de la Bahía (Nosy Baie) izy ireo tamin’ny 1797. Tatỳ aoriana dia nonina tany Amerika Afovoany izy ireo, tany amin’ny morontsiraka atsinanana. Niparitaka nanerana an’i Amerika Afovoany sy Amerika Avaratra izy ireo avy eo.
Tia mandihy be ry zareo, sady mihetsiketsika be ilay dihiny satria manaraka ny ngadon’ny amponga. Tena marevaka ny akanjo nentim-paharazana any. Fanao any koa ny mitantara angano. Anisan’ny sakafo mampiavaka azy ireo ny ereba, izay mofo mangahazo mitapelaka be.
Misy fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah 400 eo ho eo any Honduras. Atao amin’ny teny espaniola ny fivorian’izy ireo, ary misy koa amin’ny teny anglisy, garifuna, miskito, sinoa mandarin, ary Tenin’ny Tanana any Honduras.
Ereba, mofo mangahazo mitapelaka be
Mponina: 8 111 000
Fitondram-panjakana: Repoblika demokratika
Toetany: Mafana sady be orana. Mangatsiatsiaka ny faritra be tendrombohitra
Vohon-tany: Maherin’ny telo ampahefatr’ilay faritra no ahitana tendrombohitra. Maromaro ny nosy any, ary misy lemaka any amoron-tsiraka
Hizara Hizara Fitsidihana An’i Honduras
g 4/15 p. 8-9